Laba Waxyaabood Oo Gabdhaha oo Dhan Laga Rabo Inay Iska Ilaaliyaan Marka La Guursado - Aayaha
Home»XIRIIRKA IYO GUURKA»Laba Waxyaabood Oo Gabdhaha oo Dhan Laga Rabo Inay Iska Ilaaliyaan Marka La Guursado
Guur farxad iyo xasilooni leh marwalba waxaa lagu gaaraa iyada oo loo marayo dedaal iyo xushmad midba midka kale uu siinayo, maaddaama ay tahay ballanqaadka nolosha.
Waa nasiib darro in gabdhaha qaarkood aynaan weligood beddelin hab nololeedkooda marka la guursado, taas oo dhalin karta isfaham la’aan iyo furriin.
Waa kuwaan waxyaabaha gabadha laga doonayo inay ka fogaato marka la guursado kadib.
Iska ilaali saaxiibada xun
Waxaa jirta maah maah oraneysa “iisheeg qofka sxbka kula ah kadib ayan kuu sheegayaa waxaa tahay”.
Tani waxay sidoo kale qeyb ka tahay guurka, waxyaabo badan oo aad sameyso waxaa ku lug leh saaxiibadaa.
Iska ilaali saaxiibada mar walba ku marin habaabinaya isla markaana kugu qaldaya inaad sameyso waxyaabo xun xun oo aan wanaagsaneyn oo burburin kara guurkaaga iyo noloshaada wanaagsan ee mustaqbalka leh.
Saaxiibada dhabta ah waa kuwo mar walba ku dhiiri geliya isla markaana garabka kuu ah mar kasta oo aad u baahato.
Ha noqon qof xukun badan oo dabagal badan
Inaad ka badabadiso seygaaga oo aad weydiiso mar kasta meesha uu jiro ama uu ka yimaado waa calaamad xushmad darro oo aad u weyn.
Sidaa daraadeed, waxaa muhiim ah in seygaaga aad u ogaato inuu yahay madaxa qoyska.
Taas waxay dareensiin doontaa qadarin iyo inaad si dhab ah u jeceshahay. Ogoow xoriyadda waa wax qiimo badan oo qof kasta uu ubaahanyahay balse markaad dabagalka ka badiso oo aad xisaabiso waqtigiisa taasi waxay dareensiin doontaa xushmad daro iyo inaadan jecleyn.